သားသားမီးမီးတွေကို နို့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွေးနိုင်တဲ့ အစားအစာ (၁၀)မျိုး - Chit MayMay
Home Child Nutrition သားသားမီးမီးတွေကို နို့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွေးနိုင်တဲ့ အစားအစာ (၁၀)မျိုး
သားသားမီးမီးတွေကို နို့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွေးနိုင်တဲ့ အစားအစာ (၁၀)မျိုး
မိခင်အသစ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်အလုပ်၊ ရုံးအလုပ်တွေနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဆိုတာ အခက်အခဲတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တခြားသူတွေရဲ့ ပြောစကားကြောင့် ကလေးကို နို့ဖြတ်တဲ့အခါ ဘာကျွေးရမလဲ? ကလေးအတွက် ဘာကောင်းသလဲ? ဆိုတာ ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ကလေးဆရာဝန်ဆီမှာ အကြံဉာဏ် တောင်းခံတာထက် ပိုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အရာမရှိပါဘူး။
ကလေးငယ်လေးတွေကို မိခင်နို့ဖြတ်ပြီး အစာမာတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင် ကလေးတွေအတွက် လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ အစားအစာတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ အကြံပေးချက်လေးတွေ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ နို့ဖြတ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလဲ?
ဒီအရာက မိခင်အသစ်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အကြီးမားဆုံး မေးခွန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများ ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေမှာ ကလေးအား အစာမာဖြင့် စတင်နိုင်တဲ့ အချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့ ထူးခြားသော အပြောင်းအလဲတွေ ရှိပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အသက် ၄လမှ ၅လကြားကလေးငယ်တွေကို မိခင်နို့နှင့်အတူ ဖြည့်စွက်စာ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ လမစေ့ခင်မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေကို ၆လပြည့်တဲ့အထိ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်က သူတို့ solid food တချို့နဲ့ စတင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် သဲလွန်စတစ်ချို့ ပေးပါလိမ့်မယ်။
(၁) ကလေးဟာ ခေါင်းကို မတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး သူ့ဘာသာသူ ဖြောင့်မတ်စွာ ထိုင်နိုင်ပြီ ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ကလေးဟာ အစားအစာကို ကြည့်ရှုပြီး၊ သူ့လက်နဲ့ ကောက်ပြီး ပါးစပ်ထဲ ထည့်စားနိုင်ပြီဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကလေးဟာ အစားအစာတွေကို မျိုချနိုင်စွမ်းရှိပြီး အစားအစာကို ပါးစပ်ထဲမှ ထွေးမထုတ်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ကလေးကို စောစီးစွာ နို့ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားပါက ကလေးမှာကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ ဒါကတော့ မေမေတို့ သိထားရမယ့် အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပါ။
(၁) ကလေးရဲ့ နို့ဘူးထဲမှာ အစာမာ(ထမင်းကဲ့သို့သော)ကို ထည့်ကျွေးဖို့ ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားပါနဲ့။
(၂) တကယ်လို့ ကလေးဟာ လမစေ့ခင် မွေးထားတာဖြစ်ပြီး စောစီးစွာ နို့ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားလျှင် ဓါတ်မတည့်တာ၊ ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ အထူးသဖြင့် နှင်းခူရောဂါနှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ကဲ့သို့သော တခြားရောဂါတွေ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ဘယ်လိုအရာမျိုးကို ဓါတ်မတည့်မှု ရှိ/မရှိဆိုတာ စစ်ဆေးပါ။ အထူးသဖြင့် ငါး၊ gluten ပါဝင်တဲ့ အစားအစာ၊ ကြက်ဥတွေနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေကို စတင်မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကလေးငယ်ကို အသက် ၄လ(၁၇ပတ်) မပြည့်မီအထိ နို့ဖြတ်ဖို့ လုံးဝမကြိုးစားပါနဲ့။
ကလေးငယ်ကို နို့ဖြတ်တဲ့အခါ ကျွေးနိုင်တဲ့ အစားအစာများ
ကလေးငယ်အား အစာမာတွေ စတင်မိတ်ဆတ်တဲ့အခါ သစ်သီးတွေနဲ့ စတင်ပါ။ ၎င်းတို့မှာ မိခင်နို့မစို့ရတော့တဲ့အခါ ကလေးအတွက် လိုအပ်မယ့် အရေးကြီးသော အာဟာရတွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သစ်သီးဝလံတွေက ချိုမြိန်တာကြောင့် ကလေးတွေ နှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။
ပန်းသီးတစ်လုံးကို အခွံနွာပြီး ကြေညက်သွားအောင် အနှစ်ပြုလုပ်ပါ။ ကျွေးတဲ့အခါ တစ်ကြိမ်ကို ဇွန်းနဲ့ အနည်းငယ်သာ ကျွေးပေးပါ။ ကလေး နှစ်သက်ပါက သစ်တော်သီး၊ သရက်သီး၊ အခြားသစ်သီးတွေနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စတင်နိုင်ပါတယ်။
အသီးဖျော်ရည်တွေက ကလေးအတွက် နို့ဖြတ်နိုင်တဲ့ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သကြားတို့ ဘာတို့မထည့်ဘဲ လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်သာ ကျွေးရပါမယ်။
အားလူးပြုတ်ပြီး ကြိတ်ချေကျွေးနိုင်သလို မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပြုတ်ပြီး ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ မပြုတ်ခင်မှာ သေချာဆေးကြောရပါမယ်။ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် ပိုးသတ်ဆေး ကင်းရမှာဖြစ်ပြီး အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် စွပ်ပြုတ်အရည်ကြည်က ကလေးတွေအတွက် အာဟာရများစွာ ရရှိမယ့် အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ အဖတ်မကျွေးဘဲ အရည်ဖြင့်သာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးပါ။
ပဲတွေမှာ ပရိုတိန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ၎င်းက ကလေးတွေအတွက် အာဟာရစွမ်းအင်တွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပဲစေ့တွေကို ပြုတ်ပြီး ကြိတ်ချေပါ။ ကျွေးတဲ့အခါ အနည်းငယ်သာ ကျွေးရပါမယ်။
မိခင်နို့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်နေ့တာလုံး ကောင်းစွာ ရေဓါတ်ပြည့်နေဖို့နှင့် အစာမာတွေ စားတဲ့အခါ အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေဖို့ ရေတိုက်ပေးရပါမယ်။ ရေက ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆိပ်အတောက်ကင်းစေပြီး အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေပါတယ်။
၇။ အစိမ်းရောင် အရွက်များ
အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာ သံဓါတ်နှင့် အခြားသတ္တုဆားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ပဲရွက်ကဲ့သို့သော အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ပြုတ်ပြီး အနှစ် သို့ ကြိတ်ချေပြီး ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ တစ်ကြိမ် တစ်ခါသာ ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
၈။ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အစားအစာများ
ကလေးကို နို့ဖြတ်လို့ရပြီဆိုပါက ထမင်းကဲ့သို့သော ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အစားအစာများနှင့် စတင်မိတ်ဆတ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အစားအစာမှာ ဘာအစားအစာတွေ ပါဝင်သင့်သလဲဆိုတာ သေချာစေဖို့ အာဟာရဗေဒ ပညာရှင်များ၊ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ကလေးကို ဥတွေနဲ့ မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဓါတ်မတည့်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဥတွေမှာ ပရိုတိန်းနှင့် ကလေးရဲ့ အရိုးကျန်းမာရေးကို သေချာစေတဲ့ အရေးကြီးသော ဗီတာမင်များ ပါဝင်ပါတယ်။
အသားတွေမှာ ပရိုတိန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော် ကလေးက အရမ်းငယ်သေးတဲ့အတွက် ဒီပရိုတိန်းတွေ မကျွေးခင်မှာ ကလေးဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ကလေးဆရာဝန်က စားလို့ရပြီဆိုတော့မှ ကျွေးပါ။
Previous articleသားသားမီးမီးတို့ အများစုမှာရှိတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးရမလဲ
Next articleဘယ်အရာတွေက သင့်ကလေးကို ခေါင်းကိုက်စေတာလဲ?